bt-auto bulletek auto led headlight fekitori inotungamira girobhu inogadzira - Guangzhou Bulletek Electronics Technology Co., Ltd.
Guangzhou Bulletek Electronics Technology Co., Ltd. (inozivikanwa kwazvo seBT- AUTO) iri muGuangzhou, China.Isu tiri kuita zvehunyanzvi mune auto LED Headlight bulbs kwemakore.Isu tinopa yakakwirira-yekupedzisira customized (OEM uye ODM) zvigadzirwa uye masevhisi kune vatengi.
BT-AUTO LED zvigadzirwa zvakagadzikana nepamusoro pekuita.Isu tanga tichiwedzera huwandu hweauto LED mwenje zvigadzirwa, kuzadzisa zvinodiwa nevatengi.
BT-AUTO ndeye-One-Stop Sevhisi, Iwo akasiyana ezvigadzirwa zvedu anogona kusangana nevazhinji zvikumbiro zvevatengi.Neboka redu rekutengesa rine ruzivo uye sevhisi, isu tinokwanisa kuona kutenda kwedu "Mutengi Kutanga, Sevhisi Pamberi".
BT-AUTO yanga ichishanda mumisika yepasi rose yekuvhenekesa mota kwemakore.Isu takavaka hukama hwebhizinesi hwenguva dzose nevatengi vanobva kunyika dzakawanda nenzvimbo, dzakadai seEurope, Russia, North America, South America, Southeast Asia uye zvichingodaro, uye takakunda mukurumbira wakanaka.Isu tinotambira nemoyo wese vanobatana chete kubva pasirese.
Hunhu hweBT-AUTO Mwenje hunogara huri pamusoro.Isu tinomhanya kwakasimba Kudzora Hunhu mune ese maitiro, akadai: yakakwira uye yakaderera tembiricha bvunzo, kupisa isingadzivirirwe bvunzo, kuchembera bvunzo, isina mvura bvunzo, guruva bvunzo, yakakwira / yakaderera voltage bvunzo, nezvimwe.
Hunhu hweBT-AUTO hutsva.Isu takazvipira kutsvagisa nekusimudzira, tinoramba tichiparura zvigadzirwa zvitsva nguva dzose.
BT-AUTO LED Headlight Nhoroondo
Isu tiri timu yechidiki uye ine simba, nyanzvi uye ruzivo zvakare.
Isu tinopa masevhisi epamusoro-soro pamwe chete nezvigadzirwa zvepamusoro zvevatengi vedu.
Hutano hwedu innovation.Isu takatsaurirwa kuR&D, tinoramba tichiburitsa zvigadzirwa zvitsva nguva dzose.
Kutenda kwedu "Mutengi Kutanga, Sevhisi Yepamberi".
Kambani: Guangzhou Bulbtek Electronics Technology Co., Ltd.
[TOUR] Rwendo rweZuva Rimwe kuenda kuJingshan Lake, Qingy...
[PRODUCT] AKAVIGA Ballast T5 55W CANBUS Testi...
[PRODUCT] Kuenzaniswa kweHalogen, HID, Spe...
[PRODUCT & ACTIVITY] BT-AUTO Chikwata chechipiri ...
[ALIBABA] Alibaba Super September Makwikwi...